The World of Moe Thanzin: နည်းလမ်းကောင်းလေးပေးမယ်နော်
ရေးသူ မြူးမြူး at 3:19 PM
Hi, ma ma myue, Thanks & really interested. :)
မြူးတော်တော်ပိန်သွားတာပဲ။ ဇွဲရှိဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဖြစ်မယ်နော် :P
မိုက်လှချေလား.. နည်းယူသွားပါတယ်.. :D
စဉ်းစားကြည့်တာ အဲဒီ ၇ရက်ကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရပါ့လို့ ..
လုပ်တော့ လုပ်ချင်တယ် .. :D
မမြူးအတိုးချမစားနဲ့နော် ဝိတ်ပြန်တက်မှာဆိုးလို့ 
har...ta gal kya tal naw...
load ohn mha barr...kyit lo ma kaung tot woo... ko ko ko taung sate pyat mi tal..:)...nee lann u thwar tel naw myuuu...:D
နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ယူသွားတယ် ကျွန်တော့်အစ်မ တစ်ယောက်အတွက်....
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီထက် ထပ်ပိန်ရင်တော့ ဝါးခြမ်းပြား ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ မသုံးတော့ဘူး။ အစ်မဖြစ်သူ အတွက်ဘဲ နည်းယူသွားပါသည်။
အခုမှပဲသိတယ် ဖေဘွတ်က ဆေးပုလင်းပုံတွေကို ....
MaMa.. can u pls email me for more details? my email - julycho3@gmail.com
do u mind telling me where I could buy those products??